သင်၏ကော်ပိုရိတ်ဗွီဒီယိုများသည်အဘယ်ကြောင့်မာ့ခ်ကိုလွဲချော်ပြီး၎င်းနှင့် ပတ်သက်၍ ဘာလုပ်သင့်သလဲ Martech Zone
တစ်စုံတစ် ဦး က“ ကော်ပိုရိတ်ဗီဒီယို” ဆိုသည့်အခါဘာကိုဆိုလိုကြောင်းကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသိကြသည်။ သီအိုရီအရဤဝေါဟာရသည်ကော်ပိုရေးရှင်းမှပြုလုပ်သောမည်သည့်ဗီဒီယိုနှင့်မဆိုသက်ဆိုင်သည်။ ၎င်းသည်ကြားနေဖော်ပြချက်ဖြစ်သော်လည်း၎င်းမှာမူမဟုတ်တော့ပါ။ ဒီနေ့ခေတ်မှာ B2B စျေးကွက်ရှာဖွေရေးမှာကျွန်တော်တို့အများစုကပြောကြတယ် ကော်ပိုရိတ်ကိုဗီဒီယို တစ် ဦး Sneer တစ်နည်းနည်းနှင့်အတူ။
ဘာလို့လဲဆိုတော့ကော်ပိုရိတ်ဗွီဒီယိုကပြောင်ပြောင်တင်းတင်းပဲ။ ကော်ပိုရိတ်ဗီဒီယိုကိုအလွန်အမင်းဆွဲဆောင်မှုရှိသောအလုပ်ဖော်များရိုက်ကူးထားသောပုံများဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည် ပူးပေါင်း ကွန်ဖရင့်ခန်းထဲမှာ Corporate Video တွင် teleprompter မှ bullet points ကိုဖတ်သည့်စာဖတ်နေသော CEO တစ်ယောက်ပါရှိသည်။ ကော်ပိုရိတ်ဗီဒီယိုဆိုသည်မှာလူတစ် ဦး သည်၎င်းတို့၏နာမည်တံဆိပ်ကိုစားပွဲပေါ်၌ရှာပြီးစတင်လက်ခံနေသောပရိသတ်နှင့်အဆုံးသတ်သည်။
ကော်ပိုရေးရှင်းများလုပ်ဆက်လက်လုပ်ကြံကြသည်မဟုတ် ကော်ပိုရိတ် ဗီဒီယိုများ။ စျေးကွက်သမားတစ်ယောက်အနေဖြင့်သင်ကထိထိရောက်ရောက်အကျိုးရှိသောဗီဒီယိုများပြုလုပ်ရန်ရွေးချယ်နိုင်သည်။
သင်၏ခရီးကိုအဝေးမှစတင်ရန်အတွက်လိုက်နာရမည့်အဓိကအဆင့် ၃ ဆင့်ရှိသည် ကော်ပိုရိတ်ကိုဗီဒီယို နှင့်သို့ ထိရောက်သောဗီဒီယိုစျေးကွက်ရှာဖွေရေး:
အဆင့် ၁။ မဟာဗျူဟာဖြင့်စတင်ပါ
အများဆုံး ကော်ပိုရိတ် ဗွီဒီယိုအစီအစဉ်ကိုရိုးရှင်းတဲ့စကားလုံးလေးလုံးနဲ့စတင်ပါတယ် - ဗီဒီယိုလိုအပ်တယ်။ ဒီစီမံကိန်းကိုစီမံကိန်းကအဖွဲ့သည်ဗီဒီယိုကိုလိုအပ်သည်ဟုဆုံးဖြတ်ပြီးနောက်အဆင့်မှာထိုအရာကိုပြုလုပ်ရန်ဆုံးဖြတ်ပြီးဖြစ်သည်။
ကံမကောင်းစွာဖြင့်၊ ဗွီဒီယိုထုတ်လုပ်မှုသို့ခုန်ကူးခြင်းဖြင့်အရေးအကြီးဆုံးအဆင့်ကိုကျော်သွားနိုင်သည်။ ကော်ပိုရေးရှင်းဆိုင်ရာဗီဒီယိုများသည်ရှင်းလင်းပြတ်သားသည့်အပ်နှံထားသောဗျူဟာနည်းပါးမှုကြောင့်မွေးဖွားလာခြင်းဖြစ်သည်။ သင်၏စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအဖွဲ့သည်လူမှုရေးပလက်ဖောင်းအသစ်သို့မဟုတ်အဖြစ်အပျက်ဆိုင်ရာစပွန်ဆာအသစ်တစ်ခုကိုဗျူဟာနှင့်ရှင်းလင်းသောရည်မှန်းချက်မရှိဘဲမသွားနိုင်ပါ။ ထို့ကြောင့်အဘယ်ကြောင့်ဗီဒီယိုသည်ကွဲပြားခြားနားသနည်း။
ဥပမာ - Umault - ကော်ပိုရိတ်ဗီဒီယိုထဲမှာပိတ်မိနေတယ်
ဗွီဒီယိုထုတ်လုပ်မှုသို့မ ၀ င်မီ၊ ဗွီဒီယိုအတွက်ဗျူဟာကို သုံး၍ အချိန်ယူပါ။ အနည်းဆုံးတော့အောက်ပါမေးခွန်းများကိုသင်ဖြေဆိုရန်သေချာပါစေ။
ဒီဗီဒီယိုရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဘာလဲ။ သင့်ဖောက်သည်ခရီးအတွက်ဘယ်နေရာမှာလိုက်ပါသလဲ။ ဦး ဆောင်သောအကြီးမားဆုံးအမှားတစ်ခု ကော်ပိုရိတ် ဗီဒီယိုသည်အရောင်းဌာနတွင်မည်သည့်နေရာတွင်ရောက်ရှိနေသည်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရသေးပါ။ ဖောက်သည်၏ကွဲပြားခြားနားသောအဆင့်များ၌ဗီဒီယိုသည်ကွဲပြားသောအခန်းကဏ္ serves မှပါဝင်သည်။ အစောပိုင်းအဆင့်ဗွီဒီယိုသည်သင်၏အမှတ်တံဆိပ်နှင့်ဆက်လက်ထိတွေ့ရန်ပရိသတ်ကိုလှုံ့ဆော်ရန်လိုအပ်သည်။ နောက်ကျသောဗီဒီယိုသည်ဖောက်သည်များအားမှန်ကန်သောဆုံးဖြတ်ချက်ချနေသည်ကိုစိတ်ချရန်လိုအပ်သည်။ နှစ်ခုနှစ်ခုပေါင်းစပ်ဖို့ကြိုးစားနေတစ် ဦး မှ ရှုပ်ထွေးရှုပ်ထွေး.
ဒီဗီဒီယိုအတွက်ပစ်မှတ်ထားတဲ့ပရိသတ်ကဘယ်သူလဲ။ သင့်မှာမျိုးစုံရှိမယ် ဝယ် Personaဗွီဒီယိုတစ်ခုဖြင့်ရောက်ရှိရန်တစ်ခုတည်းကိုသာရွေးပါ။ လူတိုင်းကိုစကားပြောဆိုရန်ကြိုးစားခြင်းကသင့်အားမည်သူ့ကိုမျှမပြောဆိုစေပါ။ အနည်းငယ်ကွဲပြားတဲ့ပရိသတ်တွေနဲ့စကားပြောဖို့ဗွီဒီယိုအမျိုးမျိုးကိုသင်အမြဲတမ်းလုပ်နိုင်တယ်။
ဒီဗီဒီယိုကိုဘယ်နေရာမှာသုံးမှာလဲ။ အေးခဲသောအီးမေးလ်များဖြင့်ပို့ခြင်း၊ အရောင်းအစည်းအဝေးများဖွင့်ခြင်း၊ ဗီဒီယိုသည်ကြီးမားသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတစ်ခုဖြစ်ပြီးသက်ဆိုင်သူများအနေဖြင့်၎င်းကိုဖြစ်နိုင်သမျှအခြေအနေများတွင်အသုံးပြုလိုသည်ကိုနားလည်နိုင်ပါသည်။ သို့သော်ဗွီဒီယိုတစ်ခုသည် မူတည်၍ အလွန်ကွဲပြားခြားနားသောအရာများကိုပြောရန်နှင့်လုပ်ရန်လိုအပ်သည် စကားစပ် ဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်ရှိဗွီဒီယိုသည်စာတိုကိုရပ်တန့်ရန်ကြည့်ရှုသူများနှင့်ထိတွေ့ရန်တိုတို၊ ဆင်းသက်နိုင်သည့်စာမျက်နှာတစ်ခု၏ဗီဒီယိုကိုအသေးစိတ်ကြည့်ရှုရန်မိတ္တူကူးထားခြင်းဖြင့်ဝိုင်းထားသည်။
ကွဲပြားခြားနားသောအသုံးပြုမှုများအတွက်ဗီဒီယိုဗားရှင်းအမျိုးမျိုးပြုလုပ်ရန်စဉ်းစားပါ။ ဗွီဒီယိုတစ်ခုဖန်တီးရန်အကြီးမားဆုံးကုန်ကျစရိတ်မှာထုတ်လုပ်သည့်နေ့ဖြစ်သည်။ ကွဲပြားသောဗားရှင်းသို့မဟုတ်ပစ်မှတ်ထားသောဖြတ်တောက်ခြင်းကိုတည်းဖြတ်ခြင်းအတွက်အချိန်ဖြုန်းခြင်းသည်သင်၏နေရာမှအပိုမိုင်အကွာအဝေးကိုရောက်စေရန်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသည့်နည်းလမ်းဖြစ်သည်။
သင်၏အဖွဲ့နှင့်ဖြစ်စေ၊ သင်၏အေဂျင်စီနှင့်ဖြစ်စေသင်၏မဟာဗျူဟာကိုရှင်းလင်းရန်အချိန်ယူပြီးဗီဒီယိုကဘာပြောရန်နှင့်လုပ်ရန်လိုအပ်သည်ကိုရှင်းလင်းသည်။ ဒါကတစ်ခုတည်းသော "ကော်ပိုရိတ်" ပိုင်နက်နယ်မြေကနေအကြီးမားဆုံးခြေလှမ်းကိုလှမ်းသွားတယ်၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မင်းမှာဗွီဒီယိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းသတင်းစကား၊ ပစ်မှတ်ထားတဲ့ပရိသတ်နဲ့ရည်ရွယ်ချက်ရှိတယ်ဆိုတာသေချာအောင်လုပ်မှာဖြစ်တယ်။
အဆင့် ၂။ Creative ကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံပါ
အများဆုံး ကော်ပိုရိတ် ပင်ပန်းတဲ့အပူပိုင်းဒေသတွေကိုပြန်လည်ပြုပြင်ပေးတဲ့ဗီဒီယိုတွေကထပ်ခါထပ်ခါ နေပေါ်မှာကမ္ဘာမြေပေါ်ကနေထွက်လာတာနဲ့စတင်ပြီး၊ လူကူးမျဉ်းကျားတစ်လျှောက်ဖြတ်သန်းရာဆုံမှတ်များနှင့်အလုပ်ရှုပ်နေသောလမ်းဆုံသို့ချဲ့ကြည့်ပြီးဗီဒီယိုဘယ်နှစ်ယောက်မြင်တွေ့ခဲ့ရပြီလဲ။ ဆက်သွယ်မှု? ဟုတ်တယ် ဒီဗီဒီယိုတွေဟာလုပ်ရလွယ်ကူပြီးဆုံးဖြတ်ချက်ချတဲ့ကွင်းဆက်ကိုရောင်းရလွယ်တယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့မင်းတို့ထဲကဥပမာတစ်သန်းကိုထောက်ပြလို့ရတယ်။ သင့်ရဲ့ပြိုင်ဘက်အားလုံးသူတို့ကိုဖန်ဆင်းကြပြီ။
သူတို့ထိရောက်မှုမရှိတဲ့အကြောင်းကြောင့်ပဲ။ သင်၏ပြိုင်ဘက်အားလုံးသည်အလားတူပုံစံဖြင့်ဗွီဒီယိုတစ်ခုရှိပါကမည်သူသည်သင်၏ပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်ကြောင်းမှတ်မိရန်အလားအလာကိုသင်မည်သို့မျှော်လင့်နိုင်သနည်း။ ဒီဗီဒီယိုတွေကိုကြည့်ပြီးတဲ့နောက်ချက်ချင်းမေ့သွားတယ်။ အလားအလာများကသင်နှင့်သင်၏ပြိုင်ဘက်များအားလုံးကိုလုံ့လဝီရိယရှိရှိလေ့လာခြင်းဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်၏ပြိုင်ဆိုင်မှုပြီးနောက်သင်၏ဗီဒီယိုကိုကြည့်ခြင်းဖြစ်သည်။ အလားအလာတွေကိုမှတ်မိစေတဲ့ဗွီဒီယိုတစ်ခုကိုသင်ဖန်တီးဖို့လိုတယ်။
သင်သည်သင်၏အိမ်စာကိုပြီးမြောက်ပြီးပြည့်စုံသောဗွီဒီယိုဗျူဟာတစ်ခုကိုဖန်တီးခဲ့လျှင်သင်၏မက်ဆေ့ခ်ျကိုဖြတ်ကူးရန်စိတ် ၀ င်စားဖွယ်နည်းလမ်းတစ်ခုရှိနှင့်ပြီ။ ဗီဒီယိုမဟာဗျူဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြီးကျယ်တဲ့အရာကအဲဒါပဲ ငြင်းခုံခြင်းမှဖန်တီးမှုရွေးချယ်စရာဖယ်ရှားပေးပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ သင်သည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအဆင့်ကော်ပိုရေးရှင်းများရှိ CIO များအတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်အဆင့်ဗီဒီယိုတစ်ခုပြုလုပ်လိုကြောင်းသိသည်နှင့်တပြိုင်နက်၎င်းတို့သည်ကုမ္ပဏီကောင်းရှိကြောင်းစိတ်ချစေရန်သက်သေခံချက်ဗီဒီယိုတစ်ခုပြုလုပ်ရန်စီစဉ်နိုင်သည်။ ကုန်ပစ္စည်းကိုဗီဒီယိုရိုက်ကူးခြင်း (သို့) စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်အမှတ်တံဆိပ်နေရာတစ်ခုပြုလုပ်ရန်မည်သည့်အစီအစဉ်ကိုမဆိုသင်ဖယ်ရှားနိုင်သည်။ အဆိုပါဗီဒီယိုများသည်ဖောက်သည်များ၏ခရီးတွင်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
ဥပမာ: Deloitte - အဆိုပါစစ်ဌာနချုပ်စင်တာ
တစ် ဦး ကဖန်တီးမှုစိတ်ကူးအချို့သောခရစ္စတိုဖာ Nolan-level တောက်ပဖြစ်ရန်မလိုအပ်ပါ။ သင်လုပ်ချင်တာကတော့ပရိသတ်ကိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပြီးအမှတ်တရဖြစ်စေတဲ့နည်းနဲ့တိုက်ရိုက်စကားပြောနိုင်တဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုကိုရှာဖွေခြင်းဖြစ်တယ်။
တီထွင်ဖန်တီးမှုတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းသည်ဗီဒီယိုအတွက်သာဖြစ်သည်။ ခိုင်မာသော B2B စျေးကွက်ရှာဖွေရေးဗီဒီယိုသည်ထုတ်လုပ်မှုမစတင်မီတွင်ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ဇာတ်ညွှန်းနှင့် storyboards များမှတဆင့်ရှင်းလင်းပြတ်သားသောအမြင်ကိုလိုအပ်သည်။ “ ကော်ပိုရိတ်” ဗွီဒီယိုသည် (က) စာမရေးသော (သို့မဟုတ်) ခ) ကူးယူပြီးကူးယူထားသည့်စကားလုံးအစုအဝေး၏စာရင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
သင်ပြောပြလိုသည့်ဇာတ်လမ်းပေါ် မူတည်၍ စာဖြင့်ရေးသားထားသောဗီဒီယိုများသည်အားကောင်းနိုင်သည်။ ဒါဟာသက်သေခံချက်သို့မဟုတ်စိတ်ခံစားမှုဇာတ်လမ်းအဘို့အကြီးအအလုပ်လုပ်တယ်။ Unscripted ထုတ်ကုန်ဖြန့်ချိသို့မဟုတ်အမှတ်တံဆိပ်အစက်အပြောက်အဘို့ဤမျှလောက်ကြီးသောမဟုတ်ပါဘူး။ ဗီဒီယိုတစ်ခုအတွက်စိတ်ကူးသည်အခါ စီအီးအိုနှင့်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်းထို့နောက်သင်တီထွင်မှုအားအမှုဆောင်အရာရှိချုပ်နှင့်ဗီဒီယိုအယ်ဒီတာထံလွှဲပြောင်းပေးပြီး၎င်းကိုအတူတကွပေါင်းစည်းရန်လိုအပ်သည်။ ၎င်းသည်ထုတ်လုပ်မှုလွန်ကာလရှည်လျားပြီးအဓိကအချက်များကိုလွဲချော်စေသည်။
ကောင်းမွန်သော copywriter တစ်ယောက်သည်သင်၏စကားပြောအချက်များကိုဗီဒီယိုဖိုင်သို့ဘာသာပြန်ဆိုရန်အတွက်အံ့ဖွယ်အမှုများပြုလုပ်နိုင်သည်။ ဗွီဒီယိုဇာတ်ညွှန်းရေးသားခြင်းသည် copywriters အားလုံးအတွက်အထူးကျွမ်းကျင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကူးရေးသူအများစုသည်အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်အားအကြောင်းအရာကိုအရေးအသားဖြင့်ဖော်ပြရာတွင်အလွန်ကောင်းသည်။ ၎င်းတို့သည်အကြောင်းအရာများကိုအသံ / ပုံရိပ်ဖြင့်ဖော်ပြရာတွင်အလွန်ကောင်းသည်မဟုတ်။ သင်၏စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအဖွဲ့တွင်ကိုယ်ပိုင်ကော်ပီရေးသူရှိလျှင်တောင်မှသင်၏ဗွီဒီယိုများအတွက်ကျွမ်းကျင်သူဇာတ်ညွှန်းရေးသူနှင့်ဆက်သွယ်ပါ။
အဆင့် ၃။ သင့်ပရိသတ်ကိုယုံကြည်ပါ။
ကျနော်တို့ CIOs မှရောင်းချပါတယ်။ ငါတို့ပကတိဖြစ်ဖို့လိုတယ်၊
တဆိတ်လောက်? အဓိကကော်ပိုရေးရှင်းများ၏စီအိုင်အေများသည်၎င်းတို့အတွက်စာလုံးပေါင်းအားလုံးကိုလိုအပ်သည်ဟုသင်ပြောနေပါသလော။ နောက်ပြီးသင်ကလူတွေကပဟေlesိတွေ (သို့) လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်တဲ့ဝတ္ထုတွေကိုမကြိုက်ဘူးလို့ပြောလိမ့်မယ်။
သင်၏ပရိသတ်ကိုယုံကြည်ခြင်းသည်၎င်းတို့သည်စမတ်ကျသည်ဟုယုံကြည်ခြင်းဖြစ်သည်။ သူတို့အလုပ်မှာကောင်းတယ်ဆိုတာပဲ သူတို့ကိုဖျော်ဖြေပေးတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကြည့်ချင်တယ်။ ပရိသတ်တွေကဒါကိုစီးပွားဖြစ်လုပ်တာသိတယ် ကြော်ငြာတွေကိုကြည့်ရတော့မယ်ဆိုရင်ခြောက်သွေ့တဲ့ကားရောင်းဝယ်ရေးကြော်ငြာကိုရယ်စရာကောင်းတဲ့ GEICO နေရာတစ်ခုလား။
သင်၏ပရိသတ်သည်အလုပ်များနေပြီး (အဘယ်သူသည်မဟုတ်) ကသင်၏ဗွီဒီယိုကိုကြည့်ရှုရန်အချိန်ဖြုန်းဖို့အကြောင်းပြချက်ပေးပါ။ သင်၏အရောင်းစာရွက်မှကျည်ဆံရိုးရိုးရှင်းရှင်းကိုရိုးရိုးရှင်းရှင်းပြန်ဖြည့်ထားပါက၎င်းကိုအစားထိုးနိုင်သည်။ အားကောင်းသောဗီဒီယိုသည်ကြည့်ရှုသူများအားသူတို့၏တစ်နေ့တာ၏စက္ကန့် ၉၀ အကုန်ခံရန်အကြောင်းပြချက်ပေးသည်။
အားကောင်းတဲ့ဗွီဒီယိုတစ်ခုကသင့်ပရိသတ်ကိုဆွဲဆောင်စေတယ်၊ ​​စဉ်းစားစေတယ်၊ ​​ပြီးတော့အပိုတန်ဖိုးရှိတယ်။ ၎င်းသည်အရောင်းစာရွက်သို့မဟုတ်သတင်းအချက်အလက်တစ်ခုမှကောက်ယူ။ မရနိုင်သောအရာဖြစ်သည်။ သင်၏ B2B ဗီဒီယိုများကို PowerPoint ဖြင့်အစားထိုး။ မရပါ။
ဥပမာ - Nuance - ကျွန်ုပ်တို့၊ ဖောက်သည်များ
ကော်ပိုရိတ်ဗီဒီယိုဟာနေရာကောင်းထဲကနေကြီးထွားလာတယ်။ ဗွီဒီယိုသည်အလယ်အလတ်တစ်ခုအနေဖြင့်ပိုမိုလက်လှမ်းမီလာသည်နှင့်အမျှကော်ပိုရေးရှင်းများသည်လမ်းကြောင်းပေါ်ကိုတက်ချင်ကြသည်။ ယခုဗီဒီယိုသည်ခေတ်မီစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအတွက်လိုအပ်ချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ သင်ရောင်းအားကိုတိုးပွားစေပြီးသိသာထင်ရှားသည့်အမြတ်အစွန်းရစေမည့်ဗွီဒီယိုများကိုဖန်တီးရန်သေချာစေပါ။ ကော်ပိုရိတ် ဗီဒီယိုသင်အဲဒီမှာရောက်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ ရှင်းလင်းသောနည်းဗျူဟာ၊ လိမ္မာပါးနပ်သောတီထွင်ဆန်းသစ်မှုနှင့်၎င်းသည်ပရိသတ်ကိုအားထားလောက်သောဗွီဒီယိုတစ်ခု။
ကော်ပိုရိတ်ဗွီဒီယိုတစ်ခုပြုလုပ်ခြင်းကိုရှောင်ကြဉ်ရန် ၇ နည်း
Morley ၏ COO ဖြစ်ပါတယ်မျှော်လင့်ပါတယ် Umaultချီကာဂိုအခြေစိုက် B2B ဗီဒီယိုစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအေဂျင်စီ။ သူမသည် Podcast တခုကိုပူးတွဲအိမ်ရှင်အဖြစ်လက်ခံသည် ကော်ပိုရိတ်ဗီဒီယိုမှအသေခံB2B ဗီဒီယိုများကိုလူများအားအမှန်တကယ်ကြည့်ချင်သူများအတွက်ကိရိယာများနှင့်အကြံဥာဏ်များပါသောပြပွဲတစ်ခု။